Ny fahombiazan'ny Apple Watch Series 3 dia ny vidiny tery | Avy amin'ny mac aho
Ny fahombiazan'ny Apple Watch Series 3 dia ny vidiny novaina
Betsaka ny mpampiasa manontany tena Maninona no tsy mitsahatra ny mivarotra ny maodely andiany 3 an'ny Apple Watch i Apple. Ary toa ny fananana ny maodely SE dia afaka manao tanteraka raha tsy misy ny Series 3 fa tsy izany ny antony mazava, ny vidiny.
Tsy maintsy mazava tsara izany ny fahasamihafana eo amin'ny iray sy ny hafa dia tsy dia be loatra fa rehefa lazain'izy ireo aminao fa ny maodely fototra amin'ny Series 3 dia mitentina 219 euro dia io no vokatra kintana. Izy ireo dia € 80 tsy mitovy amin'ny maodely SE ary tsy isalasalana fa tampon'isa tsara izy ity.
Raha ny lojika dia tsy mitovy ny tombony, ny maodely vaovao dia manana kinova rindrambaiko tsara kokoa ary ambonin'izany rehetra izany ho an'ny mpampiasa, fa Indraindray io dia azo avela ho an'ny mpampiasa marobe ary bebe kokoa rehefa tanora izy ireo. Ireto tanora ireto dia mety ho mpanjifa amin'ity maodely Series 3 ity ary mihoatra ny ampy amin'ny filàna fototra.
Mety hampiato ny marketing i Apple fa mety ho adin-tsaina tsy ho ela nefa tsy misy daty mazava momba an'io, ka mieritreritra izahay fa hitohy ho maodely iray hafa ao anatin'ireo efa misy. Ny 219 euro an'ny maodely 38 mm na ny 249 an'ny 40mm ataovy tonga lafatra fidirana vokatra ho an'ireo izay tsy te handany vola be amin'ny smartwatch ary iza nomampihatra izy ireo dia mila asa fototra kokoa toy ny fandraisana fampandrenesana, mailaka, antso ary zavatra hafa kely.
Avy eo dia efa nitsambikina tamin'ny 299 euro an'ny maodely SE isika, famantaranandro iray izay manalavitra kely ny vidiny ambany ary mety ho iray amin'ireo famantaranandro be mpividy indrindra koa ankehitriny. Ny marina dia ny paikadin'i Apple dia tsara foana amin'io lafiny io.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Avy amin'ny mac aho » Apple products » Apple Watch » Ny fahombiazan'ny Apple Watch Series 3 dia ny vidiny novaina